Banyere Anyị - Guangdong ViFa Laser Co., Ltd
Guangdong VIFA Laser Technology Co., Ltd. bụ a elu-technology laser ịwa ahụ dị ka a ndu, ka imewe, mmepe, n'ichepụta ka otu n'ime ndị laser akụrụngwa na ngwa ọkachamara mmepụta ụlọ ọrụ. Ọkaibe ngwá ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ike dị ISO9001: 2000 quality usoro onwe ha na emeputa. Equipment n'ichepụta ọsọ na àgwà kwubara na ụlọ ọrụ na-eduga ọnọdụ.
The ụlọ ọrụ dị na Dongguan, Guangdong Province, ekpuchi 30,000 square mita. Tọrọ ntọala na 1998, tupu iji ọ bụla laser ngwá emepụta na-enye elu-edu laser igwe akụkụ maka isi azụmahịa oru ngo, ọ iwere uru nke a ike onwe ha laser igwe akụkụ n'ime laser igwe n'ichepụta ọrụ. Ugbu ngwaahịa na e rere ndị ọzọ karịa 70 mba na mpaghara. Karịsịa kemgbe 2013, ụlọ ọrụ dabeere na ahịa ina n'ụlọ na mba ọzọ, ịgbasa nhazi ike nke laser ngwá, elu-tech laser absorption nke nnyocha sayensị pesonel, nnyocha na mmepe na-emepụta 17 iche iche nke ọhụrụ laser ngwá, isi n'ụzọ dị irè-edozi a dịgasị iche iche nke ndị na-abụghị dara ihe siri ike nhazi nsogbu. Iru a nọmba nke onwe ha ikike arịa amamihe ekesịpde laser ọnwụ na osise technology. The ụlọ ọrụ na-kwubara n'etiti ndị na-eduga Chinese emeputa nke laser ngwá n'ohu.
VIFA Laser Main ngwaahịa: CO2 laser ọnwụ igwe, CO2 laser osise igwe, CO2 laser ọnwụ igwe igwefoto, linear ndu laser igwe, akpaka n'ibuli rotary osise laser igwe, laser igwe ịghasa, akpaka nri laser ọnwụ igwe, akpaka nnukwu format laser ọnwụ, laser ịnwụ cutter gawa igwe, laser marking igwe, CO2 laser marking igwe, eriri laser marking igwe, laser ọnwụ igwe ọkụ okooko osisi ákwà, Pu akpụkpọ anụ laser ọnwụ igwe, acrylic plexiglass laser osise ọnwụ igwe, laser osise roba mpempe akwụkwọ na ndị ọzọ mbara akụ na ụba nke laser akụrụngwa. Akwado iche iche nke ahaziri abụghị ọkọlọtọ laser akụrụngwa (ọrụ, na agba, size, udi ma na nke mere nwere ike ahaziri).
VIFA laser ngwá ọtụtụ-eji: akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ, n'uwe akwa, osisi na ngwaahịa, nkume, iko, ngwá ụlọ Ndinam, nlereanya Ndinam, mgbasa ozi, onyinye, plastic, roba, bipụtara na osise, nkwakọ akwụkwọ, mma, metal ihe, ngwá electronic, eletriki, instrumentation , ngwaike, akpaaka akụkụ ndị ọzọ ubi.
Na oge nke convergence, ná mmalite 2015 na ụlọ ọrụ na-ulo oru na netwọk ahịa - "factory outlets, bee ọwa, na-ekere òkè ahịa." Nye ahịa nke kacha mma price ịzụta kacha adabara igwe. Na-eto eto ọnụ na ndị ahịa, na-enye obodo na ndị magburu onwe ngwaahịa na ọrụ. VIFA electromechanical: pụtara ìhè laser akụrụngwa na ngwa soplaya!
Aha Ụlọ Ọrụ: Guangdong ViFa Laser Technology Co., Ltd.
nnochite anya: Xuefeng Zhou
Business Type: Nkesa / Wholesaler, Manufacturer, Ere ahịa, Service
Product / Service: Laser Cutting Machine , Laser osise Machine , Laser Cutting ndina , Laser akara Machine , Laser Equipment Parts , CNC Cutting Machine
Mba nke Total n'ọrụ: 5 ~ 50
Capital (Nde US $): 10000000RMB
Year Guzosie Ike: 2013
Product iche: Ịcha Equipment, ịcha & N'ogige atụrụ-gbagọrọ agbagọ Machine, Nkume Cutting Machine
Company okwu: Building A, Changming Changmao Industrial Park, Liu Yong Wei Community, Wanjiang Area, Dongguan, Guangdong, China
Main Markets: Africa, Amerika, Asia, Caribbean, East Europe, Europe, Middle East, North Europe, Oceania, Ndị ọzọ Markets, West Europe, Worldwide
Total Annual Sales Volume (Nde US $): US $ 5 Nde - US $ 10 Nde
Export Pasent: 31% - 40%
Total Annual Ịzụ Volume (Nde US $): US $ 1 Nde - US $ 2.5 Nde
Mba nke Production Lines: 15
Mba nke R & D Staff: 5 -10 People
Mba nke QC Staff: 5 -10 People
OEM Services Ese: ee
Factory Size (Sq.meters): 1,000-3,000 square mita
Nwada Ying zhou
Okwu: Building A, Changming Changmao Industrial Park, Liu Yong Wei Community, Wanjiang Area, Dongguan, Guangdong